Fulbaana 30, 2020
Prezidaant Doonaald Trampii fi itti aanaa prezidaantiin duraanii Joo Baayiden filannoon prezidaantummaa geggeessamuuf torbanneen shan hafanii ennaa jiranitti kibxata galgala falmii jalqabaa geggeessaniin dhimmootii imaammataa irratti jechaan wal dha’anii jiran.
Falmiin prezidaantummaa kaadhimamtoota lamaan gidduutti jalqabe battala gara falmii cimaati darbe. Kan sadarkaa addunyaa irraa lubbuu miliyoona tokkoo fi Yunaayitid Isteetis keessaa lubbuu kuma 200 ol galaafate jalqaba isaa ture.
Itti aanaa prezidaantiin duraanii Joo Baayiden, Prezidaantiin kun karoora hin qaban. Waa tokko iyyuu hin fidne. Rakkoon kun hagam ulfaataa akka ta’e baatii Guraandhalaa qabee beeku turan yoo jedhan, prezidaant Doonaald Traamp immoo deebii bu’aa qabu kennuu dhaan hoogganuu isaanii dubbatan.
Gamtaan Abbootii Gadaa Oromoo Akkaata Kabaja Irreechaa Irratti Ibsa Kenne
Waldaan Ortoodoksii Adaamaatti Kabajni Ayyaana Masqalaa Baranaa Dhorkamuu Himati
Akkaataa Ayyaaneffannaa Masqalaa, Godina Matakkaltti